China Cross-flow Emechiela Circuit Cowing Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers Manufacturer and Supplier | Yubing
Njirimara nke ụlọ elu na-emechi ikuku ga-emechi:
Ọdịdị imewe nke mmadụ nke nwere ọnụ ụzọ buru ibu (nke nwere ike ịgbachi) yana oghere zuru oke, ndị ọrụ mmezi nwere ike ịba n'ime ụlọ elu ahụ maka nyocha na ndozi kwa ụbọchị n'agbanyeghị akụrụngwa na-agba ọsọ ma ọ bụ mechie.
Ruru ka mma ikuku akọrọ na ịgba mmiri eruba ke ukem ụzọ, n'elu tube kpamkpam damped site ịgba mmiri zere ọ bụla akọrọ ntụpọ nke ga-eduga na ọnụ ọgụgụ nkwụnye ego. Mmiri na-agba agba na-adị ala karịa ogo ikuku nke na-ebelata oke.
Ezigbo Okpomọkụ Exchange Performance
Obe mmiri na-ekpo ọkụ na-emechi emechi emechi emechi emechi teknụzụ nke eriri igwe na nri maka ịjụ ọkụ nke mere ka ikpo ọkụ na-ebugharị iji melite arụmọrụ sistemụ.
ICE Evaporative cross-flow emechi circuit coolers 'usoro na isi ihe mmeghe:
N'ihi ikuku na mmiri na-asọba n'okporo ụzọ yiri nke ahụ, ọ nwere ike inyocha ma debe ya n'oge usoro ịgba ọsọ.
Oyi (eriri igwe)
Emere ya na igwe anaghị agba nchara 304 nke nkewaputara ma wefee 3 ugboro 2.5Mpa nrụgide iji hụ na arụmọrụ ahụ.
Ọ bụ nhọrọ nhọrọ maka nyochagharị mmiri.
Wuru ma mee PVC iji belata mmiri mmiri na-agba mmiri nke ga-ezere ọnụ ọgụgụ na njuju na-eme ka usoro arụmọrụ dịkwuo elu site na mbenata oriri mmiri na arụmọrụ kacha mma na-ebufe arụmọrụ.
Igwe eji eji igwe eji eji eji eji eji mechi centrifugal pump.
Ihe mkpọda mkpọda (tilt kwupụta ụzọ ọpụpụ na-emetọ emetọ) na igwe anaghị agba nchara ga - eme ka njupụta na mmetọ ikuku na - ehichapụ imetọ ihe na adịghị ọcha na bezin.
Nke gara aga: Lọ Nche Na-eme Ka E Nwee Obi withtọ na Redị Na-ahụ Anya
Osote: Counter-flow Emechiela Circuit Cowing Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers
Nka na ụzụ teknụzụ nke Cross-flow Emechiela circuit jụrụ
cross-eruba emechi circuit oyi
Cross-flow Emechiela Circuit Jụrụ Tower